Archive du 20170725
Ravalo sy ny TIM Norahonan’i Rivo Rakotovao
Tahaka ny efa tsinjo sahady ny valin-teny hasetrin’ny prefektiora ny fangatahan’ny antoko Tiako I Madagasikara hankalazana ny faha-15 taonany eny amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny sabotsy 29 jolay ho avy izao.
Guy Rivo Randrianarisoa “Mahamasina ihany no mety aminay”
Andrasana ny valin’ny fangatahana napetraky ny Antoko Tiako I Madagasikara hanatanteraka ny faha-15 taona niorenany eny Mahamasina.
Roland Ratsiraka Jamban’ny fankahalana an-dRavalomanana
Efa maro ihany izay niakatra fahitalavitra sy niseho gazety nanaratsy an’i Marc Ravalomanana izay.
Olivier Rakotovazaha “Aleo hankalaza malalaka ny tsingerintaonany ny TIM”
Tokony homena alalana hankalaza ny faha-15 taonany eny amin’ny «Coliseum» Antsonjombe ny antoko Tiako I Madagasikara.
Adin’ny SMM sy ny Fanjakana Tsy mety miravona
Tsy mbola misy mangirana ny momba ny fitakian’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM) amin’ny fanomezana antoka azy ireo amin’ny hanomezana fahalalahana ny mpitsara amin’ny asa,
Teknolojia vaovao Malagasy 4 amin’ny 100 no misitraka aterineto
Misongadina eo amin’ny fisian’ireo orinasa goavan’ny fifandraisan-davitra miaraka amin’ny fotodrafitrasa «fibre optique» i Madagasikara. Vaovao farany mampiseho ny fahantran’ny Malagasy indray anefa ny tontolon’ny aterineto.
Familiana mitsitsy Vita ny fisarihana ireo mpifaninana ho an’Antananarivo
Taorian’Antsirabe sy Toamasina dia notanterahina teny amin’ny tobim-pivarotan-tsolika Shell Anosy indray omaly ny fisarihana ny anaran’ireo mpamily tsara vintana ho an’Antananarivo handray anjara amin’ilay fifaninanana familiana mitsitsy solika, karakarain’ny orinasa Vivo Energy.
Marc Tatandraza “Hody any amin’ny Ray aho…”
Nanao veloma farany ny Malagasy sy ireo mpankafy azy rehetra, omaly, tetsy amin’ny California Andraharo ny “Apostoly” Marc Tatandraza.
Aiza Rafahafahana ?
Tany demokratika i Madagasikara, manaja ny sata repoblikanina, manaja ny fahalalahana ary manaja ny fanehoan-kevitra.
BACC tetsy amin’ny LMA Ampefiloha Mpiadina 78 isa no tsy tonga, sokajy A2 ny ankamaroany
Notanterahina nanomboka omaly alatsinainy 24 jolay manerana ny Nosy, haharitra efatra andro ny fanadinam-panjakana Bakalôrea.
BNI - Sabotsy Namehana Am-perinasa nanomboka omaly
Feno 60 isa sahady ankehitriny ny masoivohon’ny banky BNI Madagascar manerana ny Nosy.
Olombelo Ricky Hampiara-peo amina andriambavilanitra maromaro
Toy ny fanaony isan-taona dia hotanterahina ny 27 jolay ho avy izao etsy Antsahamanitra ilay hetsika Malaza azy vita Baka, hiarahana amin’ny olombelo Ricky.